Sekuyisikhathi eside kungase kutholakale ukuthi abahlala indlu yamapulangwe kuletha izakhamuzi zakhona isimo ekhethekile kwengqondo futhi impilo yakho isibuthaka. Admire ukubukeka ngokuphawulekayo eqhugwaneni lokhuni kungaba elingapheli. Nokho, ukuze ukuphila kule inxuluma, kudingeka singagcini nje ngokuzuza imali ethile, kodwa futhi ulwazi ebalulekile mayelana umehluko phakathi uhlobo olulodwa lwemithi ukusuka kwenye. Ethe njo nofana ebumbeke ugodo, intengo, inani impahla, izindlela kokuqeda nohlobo isisekelo - izindaba konke. On ibha intengo profiled ziyahlukahluka kusuka 1000 kuya ruble 2000 nelogi ubude 6 m.
izindlu ezakhiwe ngokhuni Kungani ethandwa
Kunzima phikisana yokuthi izinkuni zemvelo kunezinzuzo eziningi phezu kwetshe, isitini futhi amamathiriyelii aphathekako ikakhulukazi. Tubules fibre-ukhuni okuhlola iphethini ahlelwe eduze obuphelele lonke umgqomo. Lokhu kwenza nonconductor impahla, engasindi, esiwuhogelayo, okuhlala isikhathi eside futhi nokunwebeka.
Nangokuvikela izakhiwo ukhuni ukhonkolo isitini ukudlula izikhathi eziningana. Ehlobo endlini epholile uhogele ebusika kahle lokushisa ukhululekile inakekelwa. Yemvelo material izinga, ngeke avumele umoya stagnate endlini, kukhona ukupholisa zemvelo, ngakho isikhunta futhi dampness akuzona iziphuphutheki abaqashile ophilayo. Ngakolunye uhlangothi, izindlu amasethi ugodo lukathayela esakhiwe kuphela kusuka softwood. Lokhu kunomthelela ekwakheni microclimate ethize nge izinga lomoya ekhethekile ekhaya. Ukuhwamuka of inhlaka coniferous nomthelela omuhle ekwenzeni ngcono impilo yabantu, eqinisa izivikeli mzimba.
Kusukela lapho ukwakha imibhoshongo yesimanje
Sokwakha izindlu zokhuni isetshenziswe kuphela bendabuko round izingodo kanye nobuchwepheshe ubudala. Kahle kungase kutholakale ukwakhiwa kwezindlu eyenziwe ugongolo profiled. Yini namuhla kungenzeka ukwakha indlu yamapulangwe:
kusuka eluhlaza ugodo ingelashwa izindleko sakugcina;
kusukela ulinganiswe, okuyinto has a isilinganiso esinembile Jomethri nalabo izinga ukubukeka;
kwebha profiled, okuyinto lihlukile odlule eyodwa threaded izakhi elihlangana, lula inhlangano eqhugwaneni;
bepulangwe laminated, okuyinto kuveza ngesikhathi amabhodi uxhumano-lamella ngaphansi umfutho ophakeme futhi izinga lokushisa, abenze workpiece ngempela eqolo, kodwa aqinile futhi ukukhanya.
ukwakhiwa Ubuchwepheshe kwezindlu ngayinye yalezi izinto ziyafana ku amazinga ayisisekelo. Umehluko ngesikhathi kuphela izakhiwo ukuncipha yemvelo, izindlela, futhi embodiments, ukwahlukanisa kuphela.
Ethe njo ugodo laminated ayidingi zangaphandle ukugaya izindonga akudingekile ukuba ulinde kuze kube yilapho isakhiwo ngeke shwabanisa. Ngisho ngaphakathi, kubukeka kukuhle ngaphandle yokuqedela ezengeziwe.
Imiphumela ukusetshenziswa izinkuni nedosushennoy
Ukwakhiwa ibha profiled has izici zayo siqu. Okokuqala, indaba has ngezinga elithile umswakama, singasho "owomile." Kahle kahle, lesi sibalo kufanele libe seduze ezingeni 14-15%. Ikakhulu ukusetshenziswa ukwakhiwa izinkuni umswakama yemvelo, ukuthi ngokuphelele hhayi omisiwe emva ukusika. i samuntu okunjalo kuba ishibhile esingaphezu ezengeziwe ukushisa-baphathwe ugodo isitshalo cell. Profiled material elomile emhlanganweni endlini sizonikeza ukuncipha ongatheni, okuyinto igijimisa kakhulu ukwakhiwa.
Nedosushennye izingodo bioporazheniyu ezithandwa isikhunta kakhulu nangesikhunta, ngisho impregnation isinqandakuvunda usizo oluncane. Izindonga zendlu, elakhiwa ngokhuni ezinjalo, ukunikeza umswakama ungakheka kanzima deform, okuholela ngokuhlaziya ngengilazi, iminyango nezimfanelo ezingavamile zomunye uphahla obonakele. Ingabe kuwufanele kulondolozwa ekuqaleni, ukuthola inkinga enjalo kweminyaka embalwa?
Shaped ugongolo: ngobuhle nangobubi bawo
Ingabe Kukhona okwakungenziwa? Phakathi zonke izinhlobo izinto sokhuni esetshenziselwa ukwakhiwa okusheshayo izakhiwo zesimanje nezinto ezinhle, okuyisiko profiled kabanzi kunazo laminated yokwakha yaseGrisi izingodo. Kangakanani ihluke kwezinye zezinto eziphilayo?
Kusukela igama kuba sobala ukuthi lena akuyona afanayo, futhi ukuthungwa ehlanganisa izingqimba eziningana. I kwabantu of ukwaziswa okuhle obomile wukuthi endlini eyakhelwe ukuphuma kuso, ungakwazi baba ezifakelwa ngokushesha ngemva imisebenzi sokugcina. Nakuba ongavamile lukathayela ugodo maphrojekthi kwakhiwa izigaba eziningana:
yokuqala isisekelo sendlu uya ibhokisi main;
ke umsebenzi wayeka esicishe sibe unyaka;
ukuncipha ngemva yokugcina ukufakwa lwamakholi Kunenkolelo iphansi, uphahla, ukuxhumana, ngombala Ingaphakathi nengaphandle.
Lokhu ubude ukwakhiwa ayikwazi kubhekwe plus. Nokho, ukukhiqizwa ugodo lukathayela balondoloza ijubane ezinhle, okubonisa ukuthi ukufunwa akuleso emakethe.
Isici esibalulekile omuhle kokusebenzisa le nto ekwakhiweni izinga okusezingeni kungenziwa ngokuthi umhlangano elula nge sakugcina ukwahlukanisa isikhala. Ukuqedela ebusweni elingaphandle izindonga kahle ngokwanele ukuze bathuthukise ukhuni isakhiwo ilanga ovuthayo njengodengezi umbhoshongo onjalo.
Elikhulu izinga omuhle angabhekwa nokuthi ukwakhiwa kwezindlu eyenziwe ugongolo profiled cishe ayidingi ekhethekile yokuqedela evele sangaphakathi ezindongeni zendlu. Umuthi kukodwa umhlobiso omuhle yisivikelo ukushisa.
uvumelanise Shaped (pluses kanye minuses ziyohlale zikhona) kuyinto yokwakha isebenziseka ngezindlela eziningi, uma uthanda, abe okugeza noma ezengeziwe guest house ingxenye. encane isakhiwo inhlangano ubuchwepheshe akuyona sihluke kakhulu Yakha imibhoshongo ezinkulu.
ilanga ekuseni neze ihlala usuku
Imvula, iqhwa kanye frost abathintekayo ngendlela efanayo futhi ukhonkolo, futhi ibhodi lukathayela. Izinzuzo nezingozi imiphumela yalezi zenzakalo zemvelo ziyacaca kuphela ukusebenza kwe-ekhaya. Yendlu iyoba efudumele ngaphandle letengetiwe, uma kuwukuthi izifunda eseningizimu yaleli zwe. Lapho okushisa ukufinyelela okushisa aphansi kakhulu, ugongolo profiled (dry) kufanele ngci ngokucophelela kusukela ngaphandle kwendlu. Ungenza kube lula ngokwengeziwe abami ezindongeni nge mineral uboya asezindongeni noma zamapulangwe.
Izinkuni kuyinto izinto eziphilayo futhi kuncike zivutha abolile. Flame cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi impregnation bangase bavikele okwesikhashana kuphela ngokumelene ukuthungela kusukela amalangabi evulekile. Ukuze ukuphepha isikhunta isikhunta, ugongolo emise (isithombe) kufanele aphathwe njalo nge antiseptics, okuyinto ngezinye izikhathi kube inkimbinkimbi yokuhlala.
Kusukela lapho ukwakha indlu aphume sonwele noma umsedari?
Pine nesihlahla sonwele iziqu kulula kakhulu ukufinyelela kuwo futhi cheap impahla eluhlaza for ugodo. Umsedari kuyabiza ngo-nesigamu, futhi ibhekwa njengempahla engase elite okungaka ngenxa intengo, kodwa ngenxa kwabantu bayo, ephulukisa izakhiwo. Ngaphezu kwalokho, okuhlala isikhathi eside kakhulu futhi amelana umswakama impahla.
Larch ugodo banqunywa ngokusahwa zihlukaniswa ukumelana yabo ephawulekayo umswakama. Lezi izingodo musa ukubola, ngisho nangemva kweminyaka eminingana ukuba ngaphansi kwamanzi. Yingakho, ngokuvumelana ubuchwepheshe, irowu phansi amagoda ezimbali wabeka ekhaya kusuka kule ukhuni. Timber wenza larch kuyinto eqolo, kodwa uma ugcine kulesigaba, eminyakeni embalwa kuyodingeka ukuqaqa tindvonga yendlu.
Pine ufake okungenani ukungenwa ngokuhlaziya kokubili ngesikhathi omiswe futhi ezinyangeni-eside ukuncipha zemvelo. Ingxenye engenhla kwemibhoshongo kungenzeka ukwakha lezi zincwadi. Esinye sezimo ebalulekile emhlanganweni kwezindonga kunesitha cishe ngezinga elifanayo umswakama nezingodo izihlahla ezahlukene. Kungenjalo kungase skew lonke isakhiwo. Yilokho ingozi sehlo kuyinto embi ezinkulu ekwakhiweni izindlu ezakhiwe ngokhuni. Ochwepheshe bathi ikhono ukubhekana umswakama izingodo incike umphumela wonke umsebenzi.
Ngo Olden eligoqiwe "vchernovuyu" log ibhokisi kumele ame njengoba enjalo okungenani unyaka wonke, kuncike zonke imimoya, imvula, ilanga kanye neziphepho. Kungaleso sikhathi kuphela lapho nalutho zezikhali ku izingodo kanye eqoqwe futhi sinendawo unomphela. Kwabe sekufika umsebenzi kokuvala, kubekwa phansi futhi ukwakhiwa ophahleni.
ukukhiqizwa Modern izingodo lukathayela kusungulwa ngendlela yokuthi nge omiswe kahle izingodo egumbini elifudumele bayaqhubeka ukudayiselwa isimo nomswakama oyifunayo. Uma wathenga impahla, lonke ukwakhiwa kungaqedwa ngenkathi eyodwa.
Indlu Design: What You Need to Know
uvumelanise Shaped (intengo kuxhomeke ezicini eziningana) ngokuvumelana ubuchwephese obulandelayo:
preform kusuka isiqu esihlahleni esisodwa (isitswebhu) zihlanjululwa kusukela cortex amahlumela awo;
amalungu afanayo nge izinhlangothi ezine kusetshenzwe kakhulu ukungadluliseli ukuma njalo weJiyomethri enenani elithile of izikopelo nhlangothi zombili.
Ubukhulu transverse of workpiece kumele kube okufanayo kulo lonke ubude ebalisisiwe ngaphezulu, njengoba ziyancipha e inqubo ukuncipha kwe-amamilimitha angu ambalwa. Ngokwesibonelo, ukuthola ibha profiled 200x200, buka Sectional ka workpiece kufanele alingane 210 × 210 mm.
Izinga ugodo ubude 6 amamitha, ngesimo ukuncishiselwa - trapezoid. Ezinhlangothini yasenhla nemithombo yasenzansi babe inkatho uhlobo loxhumano "umama nobaba" e ubude egcwele. Lapho ebeka izingodo on nomunye, spikes anjalo kanye anemifantu ungavumeli ukuba ukuwushintsha, okuyinto isiqinisekiso lokwakha izindonga eziqinile.
Ukuze ithuba inhlangano kahle elula, izindlu amasethi ugodo okwenyanga ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi "umklami".
Ezingosini, emnyango emafasiteleni wenza ayimpoqo isibopho ugongolo phakathi kwazo. Ukuze wenze lokhu, yamba ngokusebenzisa izimbobo round emalungeni. Ngemva kwalokho, ukufaka, futhi nyá amagalelo ka izando esindayo birch ekhethekile nageli (ezigxotsheni) square. Ngo inqubo ukuncipha yemvelo "uvalwe" ugodo ukhuni bacabangisise Nagel, iqinisekisa ukuthembeka odongeni iminyaka eminingi.
umbhoshongo Ngokhuni: ukuqala kuphi?
Kuyacaca ukuthi akukho nelilodwa ukwakha indlu emoyeni. Into yokuqala udinga ukuba banakekele - ke umhlaba. Isinyathelo esilandelayo ukuze ukhethe iphrojekthi kanye nomklamo kwemibhalo ukwakhiwa, ehlanganisa ingxenye ubunjiniyela of izibalo ephelele nemininingwane yezakhiwo kanye nokwakhiwa, kanye imininingwane endlini esizayo.
Projects kusukela Amabha profiled uke ihlanganiswe izilinganiso eyabonisa, okhombisa ngenani elithandekayo impahla. Lapho senza ukubala uyakucabangela Usayizi ukwakhiwa kanye Ingxenye evundlile izinkuni.
Isinyathelo esilandelayo Kumiswa ngaphansi isakhiwo isisekelo. Kunconywa ukuba enze inqwaba, inguqulo inqwaba-ikhasethi engajulile (55-70 cm) ukugcwalisa. imininingwane eqondile Ukukhetha kuncike indawo kanye nesisombululo senzelwe ukwakhiwa komhlaba.
On baqina kwesisekelo ungangenisi amanzi, ukwahlukanisa ungqimba ke inombolo yokuqala izingodo okuyinto awashintsheki hhayi kuphela lemahlanganweni phakathi ngokwabo kodwa futhi base ukhonkolo. Ngokulandelayo, ukwakhiwa lomthofu ngokuvumelana project impahla ekhethiwe. Uma uthenge profiled yokwakha yaseGrisi laminated amapulangwe, ikhaya eqoqwe ngokushesha "ukuze uqede": phakathi izingodo kuvuleke ungqimba ezondile linseed isolator, ukubeka amafasitela eminyango, nokwenza futhi uvale ophahleni.
A iphutha elivamile ebandleni izakhiwo sokhuni uxhumano ngesandla esiqinile of yophahla secondary yokhalo iphelela ukuze ukuncipha. Kunalokho ungavula esikhathini esizayo? Ngo inqubo omiswe zemvelo ugodo odongeni angles compounds ziyahlukahluka phakathi izakhi we uphahla. Ngenxa yalokho, kungaba imishayo idabukile emvula ramps ophahleni. Njengoba Bathi, "ezisheshayo - ke ziyokhamuluka."
Ingabe kungenzeka ukunciphisa izindleko ukwakhiwa?
Phakathi okukhethwa iningi isabelomali ukwakha indlu ngokhuni kungenziwa ngokuthi isinyathelo esilandelayo:
imibhobho yensimbi yokwakha izisekelo isikulufo;
mncane 100mm ibha profiled (pluses kanye minuses zicacile, ngaphandle kokuchitha isikhathi) umswakama okuqukethwe yemvelo;
ukwahlukanisa ubuncane izibuya nophahla (amaminerali uvolo-100 mm);
ozimele elula sokhuni;
ukwenqaba "obsad" ngesikhathi ukufakwa emafasiteleni;
zisebenzisa i-nokubopha nezinsimbi ezivamile metal izinzipho nezikhonkwane;
ubuncane kokuqeda izinto;
ophahleni embozwe slate noma ondulin.
Ngokusebenzisa amathuluzi ezingabizi kakhulu, ungakwazi Yiqiniso, bese wakha indlu. Kungakanani ngeke ahlale ekhaya ukukhonza umnikazi wabo wentshiseko, izohlala umbuzo sikhathi kuphela uzokuphendula. Sekuyisikhathi eside iqiniso laziwa ukuthi "ungoqo okhokhela kabili." Kuyintokozo yini ezinye izindlela ungathola ukulondoloza ku induduzo yakho siqu, uma ugcine imithombo futhi banciphise izindleko?
Kukhona ezinye izinketho ukulondoloza, lapho ungagcina isabelomali, kusetshenziswa izinto zokwakha ezitholakala esiqinile ukwakhiwa. Okokuqala, kudingeka ukunciphisa inani amahholo noveranda kuphrojekthi. Lapho uthenga icebo flat komhlaba kungenzeka ukuncipha olukhulu endleleni izindleko eziyisisekelo. Lapho landscape eziyinkimbinkimbi kufanele bacabangele izici zayo kanye nokusetshenziswa ukuphakama umehluko ukulungiswa iphrojekthi.
izindleko zokwakha kungenziwa ukusika kakhulu ukuthenga design eqeda izingodo ethe noma okwenyanga. Isici esikhethekile sale ndlela ukuthi indlu silethwa ikhasimende zezikhali, izakhi olunezinombolo futhi imiyalelo enemininingwane inhlangano. Qonda it can yimuphi umuntu owake wafunda esikoleni. Ngaphezu kwalokho, izinkampani eziningi ukubeka bafakele abasebenzi babo kwizinhlelo ngumnikazi design ngokuphelele futhi nginikeze kumnikazi, bathi, "turnkey".
Underfloor amanzi phansi kukhonkolo lokhuni. phansi eshubile indlu yamapulangwe
Handrails ngoba izitebhisi - Imfanelo ebalulekile
I ezinemali kunazo zonke imibono ibhizinisi owenza abantu ocebile
"Atorvastatin": ukubuyekezwa, analogs, ukwakheka kanye yokusetshenziswa
Coin Petra 1 - 1 Rouble (1724), isithombe. zemali Isiliva kaPetru 1
Ukulungisa Floor: izici inqubo ubuchwepheshe
Yomgudu amapayipi amanzi indlu and womzalwane: izikimu kanye nemithetho